Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na-ebuga kiosks 87 nwere biometric kacha ọhụrụ TS6
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na-ebuga kiosks 87 nwere biometric kacha ọhụrụ TS6
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na-ebuga kiosks 87 nwere biometric kacha ọhụrụ TS6.
Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na-arụ ọrụ 87 nke Kiosks TS6 kacha ọhụrụ SITA gafere Terminal 1 na 2 iji kwalite ahụmịhe njem.
Kiosks na-enyere SITA biometric na ọrụ izi ozi akpa gbanwere ọdụ ụgbọ elu Frankfurt.
Kiosks nbanye TS6 nke SITA na-enye ndị njem ohere ịbanye ngwa ngwa wee nweta mkpado akpa maka ọrụ dobe akpa onwe ha.
Ụlọ kiosks na-arụ ọrụ na egwu SITA Flex ma na-enye ndị njem ahụmahụ otu onye ọrụ n'ofe ọtụtụ ụgbọ elu.
SITA, onye na-eweta teknụzụ maka ụlọ ọrụ ụgbọ njem ikuku, ekwupụtala nnukwu ntinye teknụzụ na Airportgbọ elu Frankfurt iji kwalite ahụmịhe ndị njem na ịbawanye arụmọrụ ọdụ ụgbọ elu ahụ. Nbugharị ahụ gosipụtara ntinye nke 87 biometric-enyere SITA TS6 Kiosks na-atụ anya na a ga-agwụcha ma emechaa n'afọ a.
SITAKiosks nbanye TS6 dị iche iche na-enye ndị njem ohere ịbanye ngwa ngwa wee nweta mkpado akpa maka ọrụ dobe akpa onwe onye. Ụlọ kiosks na-arụkọ ọrụ ọnụ SITA Flex ma nye ndị njem ahụ ahụmịhe onye ọrụ jikọtara ọnụ n'ofe ụgbọ elu dị iche iche, na-abawanye ịdị mfe nke iji ma na-ebelata ihe mmetụ ahụ.
Ndị njem na-anọgide na-achịkwa nhọrọ ọrụ onwe ha, site na ntinye aka ruo na dobe akpa onwe ha site na kiosk nwere ike ime ihe ike. Nke ọhụrụ SITA TS6 kiosk bụ onye mmeri nke 2021 IF Design award for slick, adigide na imewe ime mgbanwe, nke enwere ike ịhazi ya ka ọ dabara n'ụdị ika ọdụ ụgbọ elu yana mkpa ndị ahịa akọwapụtara. Nhazi modular pụtakwara nkwalite na mgbanwe enwere ike ime na-edochighị kiosk dum, na-eweta uru agbakwunyere ọnụ ahịa yana nkwado.
Enwere ike iji kiosk TS6 SITA maka nbanye na mkpado akpa na-emeghe ụzọ maka njem ndị njem na-enweghị mmetụ kpamkpam. Nbuga na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na-anọchite anya mmejuputa iwu SITA kacha na Europe.
Dr. Pierre-Dominique Prümm, Executive Director Aviation & Infrastructure na Fraport, kwuru, sị: "Inye ndị njem njem ọhụrụ, dị nchebe na ụzọ ka mma iji mee njem ma hụ na anyị nwere ọrụ ọdụ ụgbọ elu na-agbanwe agbanwe na nke ọma dị oké mkpa ka ụlọ ọrụ anyị na-agbake na mmetụta nke ọrịa a. SITA na-akwado anyị n'imezu ebumnuche a, anyị na-atụkwa anya ịnabata ọtụtụ ndị njem laghachi na mbara igwe. "
Sergio Colella, Onye isi ala Europe, SITA, kwuru, sị: “Anyị nwere obi ụtọ ịnọgide na-akwado ọdụ ụgbọ elu ndị dị ka Frankfurt na mgbake ha na mmetụta ọrịa a. Nkà na ụzụ na-ejide mkpịsị ugodi nke imeghe njem dị mma na nke dị nchebe maka mmadụ niile, na-anakọta ego ndị furu efu n'ime ọnwa 18 gara aga, na ịhụ na arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe nke nwere ike ime mgbanwe n'ọnọdụ ndị a na-atụghị anya ya nke echi. Ụlọ ọrụ ụgbọ njem siri ike na nke na-adịgide adịgide ga-abara ndị njem, akụ na ụba na ọrụ uru. "